Ọñụ Adaa Dịka Gọọmenti Etiti Kwere Nkwà Ịkwụ Anambra Ụgwọ O Ji Ya
Oke ọñụ dara nnọọ na steeti Anambra dịka e mere ka a mara na gọọmenti etiti ekwela nkwa ịkwụ ọchịchị steeti ahụ ego dị ijeri Naịra iri atọ na asaa na ụma iri iteghete na ise (N37.95billion) n'ime ijeri Naịra iri anọ na atọ (N43 billion) o ji ya n'ụgwọ, n'ihi ọtụtụ ụzọ awara awara gọọmenti etiti nke gọọmenti steeti ahụ jiri ego ya wee rụgharịa, nakwa ọtụtụ mgbata ọsọ dị iche iche dịịrị ọchịchị gọọmenti etiti, nke ọchịchị steeti ahụ jigoro ego ya wee gbata n'ụzọ dị oke mkpa.
Ozi ọma ahụ bụ nke e mere ka a mara site n'ọnụ onye na-anọchite anya ọgbọ nta nkwàdo Anambra Central n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu Sineeti ala anyị, bụ maazị Victor Umeh n'okwu ya n'ọgbakọ iguzobe ndị otu nkwàdo ya n'obodo Isu-Anịọcha dị n'okpuru ọchịchị Awka North. O toro aka na-achị steeti ahụ, bụ gọvanọ Willie Obianọ n'ihi idozigharịsị okporo ụzọ awara awara ahụ, bụ nke o kwuru nnọọ na ọ bara ọtụtụ urù dị iche iche, ma mee ka a mara na gọọmenti etiti ga-akwụ ụgwọ ahụ nso nso a, ma kwụchapụkwa ego nke fọrọ afọ na mgbe adịghị anya.
O kwuru na ọtụtụ ọrụ mmepe dị iche iche gọọmenti steeti ahụ rụpụtagoro site n'ịgba mbọ ya na njikọ aka ya na ụlọ ọrụ gọọmenti etiti dị iche iche enyela aka n'ụzọ pụrụ iche iji kwàlite ọnọdụ mmepe steeti ahụ. O kwezịrị ụmụafọ ọgbọ nta nkwàdo Anambra South nkwa na ha ga-erite ọtụtụ urù site n'ọtụtụ ọrụ ngó dị iche iche o mere ka ha bàta n'amụmà ego ọrụ ala anyị nke ahọ a, ọ bụnadị dịka o mere ka ha mara na ebumnobi ya o jiri gaba ụlọ ọgbakọ sineeti bụ ka o kwuchitere ụmụ mmadụ ọnụ ha ma mekwa ka steeti ahụ kèta oke nke ha n'èrèrè ọchịchị onye kwuo uche ya n'ogoogo gọọmenti etiti.
N'ihe gbasaara nkabì ikpe nke ụlọ ikpe na-ahụ maka nhọpụta ọchịchị nyere gbasaara nhọpụta ya n'ahọ gara aga, ọ kọwara ya dịka nke ziri ezi, nakwa nke na-egosi n'ezie na ndị ọgbọ nta nkwàdo ahụ kwụ otu ndọrọ ndọrọ APGA n'azụ, ma kpọkuo ha ka ha kwụdosie ike n'ịkwàdo ya bụ otu ndọrọ ndọrọ.